10 Arụ Ọrụ Ngosiputa Ama | Martech Zone
Pasent ole nke ndị ahịa, na nkezi, na-atụ uche oke ha? Gini bu onodu nso nso? Ego ole ka mma ahịa reps kacha mma na-arụ ma e jiri ya tụnyere nkezi? Pasent ole nke ndị na-ere ahịa na-aghọta n'ezie ihe mgbu ndị ahịa ha? Pasent ole nke ndị na-ere ahịa na-eche na pipeline ziri ezi?
Na mmekorita ya na Ọrụ Salesforce.com, nke a ozi sitere na TAS Group na-eweputa mpempe data iri dị omimi banyere arụmọrụ ahịa. Ma ị na-ahụ ya dị ka ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ, ma ọ bụ na ọ bụghị ihe ijuanya ma ọlị, data ahụ na-enwupụta oghere dị na arụmọrụ ahịa nke metụtara ọtụtụ ụlọ ọrụ ahịa.
Nnukwu ndị njikwa azụmaahịa maara otu esi enyocha ọrụ otu ha nke ọma ma mata ihe na-eme ka ndị otu ahịa na-akpali akpali, na-arụ ọrụ dị elu. Ị nwere?
Tags: nkezi ọnụego nsoimechipipelinedashboard ahianjikwa ahiaonye njikwa ịre ahịaarụmọrụ ahịapipeline ahịaoke ahiaonye na-ere ahịaahịa akụkọstats ahịandị ahịandị na-ere ahịaotu otuọrụ.com